Ntuziaka Na Social Marketing Marketing Site na ndị ọkachamara dị elu
Ịchọrọ ịmezi usoro mgbasa ozi mgbasaozi gị? E nwere ọtụtụ atụmatụ na usoro iji mee ka o kwe omume, mana ọkachamara mgbasaozi kachasị mma na-akwado Max Bell, ọkachamara ọkachamara , na-atụle n'okpuru ebe a.
Jiri Twitter iji mepụta ndị na-ege gị ntị
Ikwesiri iburu n'uche Facebook na Twitter iji wuo ndi na ege gi nt i. Ọ bụrụ na ị dị oke mkpa ịmepụta ndị na-ege gị ntị, ị ghaghị ịṅa ntị na itinye ọdịnaya na ịkekọrịta ha na ịntanetị ogologo ụbọchị. Ị ga-edere isiokwu ndị dị mma, mepụta foto na ihe osise dị iche iche iji gbasaa ha n'ịntanetị. Nke a ga-etinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ, mana enweghi mkpụmkpụ, n'ihi ya, ị ga-egosipụta ụfọdụ ndidi iji nweta nchọta ahụ achọrọ. Jiri Twitter ma chọpụta ndị ọrụ dị mkpa ịgbaso - it consulting services usa in Portland. Kwuo ụfọdụ tweet na foto na profaịlụ gị, tinye ndị mmadụ na fim, vidiyo, audios na ihe ndị yiri ya.
Nyochaa Afọ gara aga iji meziwanye ozi
Ndị ọkachamara na-ekwukwa na ndị ọchụnta ego kwesịrị ịtụle ọdịnaya ndị dị ugbu a iji meziwanye àgwà na nyochaa ihe niile ha nwere. I kwesiri itinye uche na ibiputa ọdịnaya obi, ma ekwesighi inwe nkwekorita na nke a..Jiri ngwaọrụ dịgasị iche iche iji nyochaa ma nyochaa arụmọrụ nke ọdịnaya gara aga, ma melite nyocha zuru oke nke profaịlụ mgbasa ozi gị. Mbụ, ị ga-etinye otu isiokwu na nchịkọta mgbasa ozi mgbasa ozi iji chọpụta ụdị ọdịnaya ọ na-eme ka mmadụ na ndị ọzọ. Ọ ga-eme ka ị mara ihe ndị mmadụ kachasị amasị ha nakwa otu esi emeziwanye ihe ị ga - eme n'ọdịnihu site n'ịgwa ha ụfọdụ isiokwu dị mma.
Kwalite Njirimara Anya na Njikọ
Ihe odide anya pụtara na ị kwesịrị ịkekọrịta vidio na ihe oyiyi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-abịa na-eme atụmatụ ọdịnaya, ị kwesịrị iche echiche banyere ụdị ọdịnaya ndị na-ege gị ntị masịrị ya. Ọ dị ezigbo mkpa ịkọrọ naanị ihe ụmụazụ gị na Fans na-achọ ịchọta. I kwesịghị ịmekọrịta vidio ma ọ bụ vidiyo ndị toro eto iji kpụga okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị dịka ọ nwere ike imebi aha gị na ịntanetị.
Gbanwee Ọdịnaya Afọ Afọ
I kwesịghị inwe ihe ọ bụla megidere na ịnwale ụdị ọdịnaya dịgasị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịkekọrịta ọtụtụ vidiyo pụrụ iche na YouTube na ọtụtụ ihe oyiyi na Facebook na Instagram. Ị ga-ahụ mgbe niile na ntanetị mgbasa ozi gị nwere ihe dịgasị iche iche na ụdị mgbanwe dị iche iche ka i wee nwee ike imewanye visibiliti gị.
Na-enye ọdịnaya na-aga n'ihu
Enweghị ụzọ ọhụụ ga-esi arụ ọrụ ma ọ bụ azụmahịa na-aga nke ọma, na ị ga-arụ ọrụ siri ike. Ihe dị mkpa bụ na ị ga-anapụta ọdịnaya mgbe niile iji mee ka aka gị na mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla. Nke a ga - eme ka ị nwee ọtụtụ mmasị, mbak, na ikwu okwu, si otú a na - enyere gị aka inweta ndụ site na nkasi obi nke ụlọ gị. Ị nwere ike ịkwanye ọtụtụ ụzọ na ibe weebụ gị site n'inweta ọdịnaya dịka kwa ụbọchị. Enweghị ihe dị mma, ndị mmadụ ga-agwụ ike, ha ga-ahapụkwa ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi. Ekwenyesiri m ike na ị gaghị achọ ka nke ahụ mee, n'ihi ya, ị ghaghị ịhapụ ha ọdịnaya ọdịnaya ọ bụla kwa ụbọchị.